Qeybta 1: Maxaad QuickTime ma furi karo files AVCHD?
Qeybta 2: Isticmaal Wondershare Video Converter Ultimate for Mac
Qeybta 3: Talooyin ku saabsan sida ay u gudbiyaan videos AVCHD ka kaamirada si Mac
Waa in la ogaadaa in qaab AVCHD waa mid ka mid ah qaababka ugu fiican in la ciyaari karo madal kasta oo adduunka ah si fudud oo ku qanacsan. Sidaa darteed waa in la ogaadaa in wax walba oo daaqadaha iyo Mac qaab waa playable xataa haddii qalab dheeraad ah oo laga soo qaadan in la xiriira Mac. Ciyaaryahanka QuickTime ah in la soo saaro by Inc Apple iyo ayaa gundhig gudahood Mac yahay wax ka ciyaari kara oo ha user ku daawanaya video mid ka mid ah ku sifayn kasta oo ay ku jiraan video AVCHD ah. Sidoo kale waa in la ogaadaa in qaladaad waa mid aad dhif u ah sida QuickTime waxaa had iyo jeer la casriyeeyay hab fiican oo user iyo sidoo helo amniga ugu fiican. Mararka si kastaba ha ahaatee user ayaa wajahaya ma aha oo kaliya arrinta laakiin sidoo kale gasho arrinta marka ay timaado si toos ah file file AVCHD ciyaaro gal ciyaaryahanka Mac QuickTime. Tutorial Tani ayaa sidaas daraaddeed la sameeyey si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah marka la eego isticmaalka QuickTime iyo files AVCHD ah. Waxa kale oo hubin doona in gobolka talooyin farshaxanka iyo tabaha yihiin ma ahan oo keliya la siiyaa, laakiin ay sidoo kale waxaa lagu sharaxay si hirgelinta noqdo mid fudud oo la taaban karo.
Part1: Maxaad QuickTime ma furi kartid files AVCHD?
QuickTime waa ugu boosaska badan oo ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican si loo hubiyo in dadka isticmaala ee OS Mac marnaba galaan arrimaha iyo dhibaato marka ay timaado ciyaaro qaabab kala duwan. Dhinaca kale waxa ay sidoo kale waa in la ogaadaa in user laga yaabaa in ay ku adag tahay oo waxaa ka buuxda arrimaha si ay u hubiyaan in qaab AVCHD la ciyaaray. Mararka ay naftooda users aadan awoodin in aad ka heli files AVCHD in ay yihiin labada kaydsan cajaladaha ama isticmaala ayaa iyaga soo guuriyeen u drives adag ka. In dhammaan xaaladood oo kale waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in nidaamka soo socda waxaa la socda in la hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa dadka isticmaala oo ay aad u hesho natiijooyinka ugu fiican ee arrintan la xiriira.
Ka dib markii camera waxaa ku xirnayn kaydinta la xiriira waa in la furay:
Icon AVCHD ayaa markaa waa in la xaq u riixi si loo hubiyo in furan QuickTime ciyaaryahan doorasho la doorto:
QuickTime ayaa heli doona dhammaan faylasha in ay tahay in la furay ama ciyaaryahanka furi karaa si fudud oo ku qanacsan tahay:
Geedi socodka in lagu kor ku xusan waa mid fudud oo si sahlan loo weli la raaco haddii user helo dhibaato ka dibna waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in bulshooyinka online Apple Inc. ayaa la soo xiriiray si ay u helaan arrinta go'an siyaabo dhowr ah iyo sidoo kale.
Part2: Isticmaal Wondershare Video Converter Ultimate for Mac
Si aad u hubiso in AVCHD ah waxaa loo baddalaa qaab QuickTime ku taageeray software sakhiray waa kan ugu fiican oo ay u hubiyaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Dhiirigelinayaan in uu sida ugu Wondershare sameeyey hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka oo aan wax arrintan oo dhibaato oo sidaas daraaddeed isticmaalka barnaamijka ayaa sidoo kale la sameeyey si fudud oo fudud. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican ee arrintan la xiriira waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in talaabooyinka soo socda la raacay si ay u helaan arrinta la xalin habka ugu fiican iyo in la hubiyo in natiijada kama dambaysta ah in la helo waa waafaqsan shuruudaha user:
User waa in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi, rakibay oo bilaabay sameeyo. Link download ayaa laga heli karaa URL http://www.wondershare.com/mac-video-converter-ultimate/guide.html
User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in fallaadhiina waxay ka double waxaa riixi si qaab la doonayo waxaa la soo xulay oo video ah waxaa loo baddalaa fudayd iyo qanacsanaanta,
Marka la sameeyo user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in button diinta waxaa lagu soo xulay si ay u hubiyaan in nidaamka halkan dhamaado iyo diinta si ay u QuickTime qaab saaxiibtinimo waxaa loo sameeyaa dib u dhac kasta oo aan:
Part3: Talooyin ku saabsan sida ay u gudbiyaan videos AVCHD ka kaamirada si Mac
Waa in la ogaadaa in iMovie ama software default video iyo sawir qabtay inay hubiyaan in fiidiyo ah la ogaado iyo wixii ku jira ee lagu muujiyey iyadoo la kaashanayo qasabno qaar ka mid ah la sameeyo. Isku xidhka ugu Sidaa darteed waa in la dhisaa si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican in la siiyo nidaamka adigoo riixaya badhanka goobaha la xidhiidha in la hubiyo in qaybta gargaar la furay iyo wixii kaloo la sameeyo sameeyo.
IMovie wuxuu taageeraa aad bay u kooban qaabab video iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in qaab ku habboon waa in la doortay ka dhanka ah fiidiyo ah oo uu soo shidan oo la hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada fanka ka dhigi doonaa. Waa software iMovie in sidoo kale u ogolaataa user ma aha oo kaliya in uu kaydiyo xogta hab fiican lakiin sidoo kale u ogolaataa user si aad u hesho sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah qeexidda pixel farshaxanka. Tani software iMovie sidoo kale u ogolaataa user si loo hubiyo in video la saxar iyo natiijooyinka la doonayo waxaa lagu helay hab ugu fiican.
Videos ayaa sidoo kale la keeno karo si Mac ka hor inta aan la keeno si ay iMovie ah oo ay tahay habka ugu wanaagsan ee loo hubiyo in kaliya kuwa filimada iyo sawirada qaab AVCHD waxaa lagu keydiyaa iMovie oo dadka isticmaala ku doonayaan iyo inta kale si toos ah tuuraa ka Mac sida ugu dhakhsaha badan doorashada ayaa la sameeyey. Videos ayaa sidoo kale ay tahay in la saxar ah ee qaybaha yar si loo hubiyo in meel bannaan oo yar ayaa la wada baabbi'iyey. Waxaa sidoo kale in la xuso in ku xusan waa ugu fiican iyo habka ugu diro daafaca ah in la hubiyo in wixii kaloo la sameeyo oo user helo xarunta ugu wanaagsan ee lagu kaydiyo meel sida ay caarada ah oo forums online aad u yar ama dhufto ee uu daaha.
> Resource > QuickTime > Sida loo badalo AVCHD in QuickTime on Mac?